5% mepere emepe Manufacturers & Suppliers - China 5% Openness Factory
N'ihe ngosipụta Sun Shade Sunscreen Mesh Curtain Blinds PVC Fabrics
Igwe anwụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ inyeaka inyeaka na-egbochi anwụ na anwụ. A na-ejikarị ya ekpuchi ihe iji zere ịkpọtụrụ ya na ọkụ siri ike ma nwee mmetụta nke igbochi ọkụ siri ike na ụzarị ọkụ ultraviolet na akụkụ ndị ọzọ.
Ihu ọma, ndị nkịtị ntupu ihuenyo ákwà blackout ọnụego esịmde 85% -99%, na openness dịgasị 1% -15%, oku retardant ọrụ dị na a na-adịgide adịgide ire ọkụ retardant mmetụta.
Ọmụmụ ihe Sunlight na-enyocha Azụmaahịa Igwe Igwe Igwe Anya Anya
Họrọ ihe mkpuchi maka ọmụmụ ihe
1. Agba dị mkpa iji dakọtara na ihe ndị dị n'ime ụlọ.
Mgbe ị na-ahọrọ ìsì, ọ kachasị mma ị paya ntị na agba nke arịa ndị ọzọ na-amụ ihe, karịsịa agba nke igbe akwụkwọ. Ngwongwo nke oge a dị mkpa karịa nhazi. Mgbe ị na-ahọrọ agba nke ihe mkpuchi, ọ bụrụ na anyị elee anya na agba nke arịa. dakọtara na agba nke ngwá ụlọ, ọmụmụ nwere ike wuru mma.
Rụpụta Sunscreen Fabric Site China Blinds Factory Sheer Mara mma Sunscreen Blinds
Kpuru ìsì ihuenyo agba egwuregwu
N'ụlọ mma ụlọ, anyị na-atụlekarị agba iji mee ụlọ mma. A sị ka e kwuwe, enweghi nnukwu mmejọ na agba, mana ọ karịrị akarị, ọ ga-abụrịrị ihe izere na ọ ga-abụ obere ihe na-agwụ ike! Na agba ụlọ mma ọ bụghị naanị ime ka ụlọ dị mma, kamakwa iweta ọnọdụ dị iche iche nye ndị nwere agba dị iche iche. Yabụ kedu iji chọọ ụlọ mara mma? Biko soro Groupeve nwere anya!
N'èzí Manual Window Shutter Ọkara Onyunyo Dual Layer Electric ugboro abụọ ala Blinds
Ngwa nke Groupeve sunscreen zebra fabric
1. buildingslọ ọha (ụlọ mmega ahụ, nnukwu ihe nkiri, ọdụ ụgbọ elu, ebe ngosi)
Akwa dị mkpa iji zute ọkwa B1 (oxygen index ≥32) na ọkụ ọkụ
2. buildinglọ ụlọ ọrụ (ọfịs, ime ụlọ nzukọ, n'ọnụ ụlọ ogologo)
Iche ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ na n’ebe ọdịda anyanwụ na-ahọrọkarị akwa ndị nwere oghere 1% -3%; na-eche ihu n’ebe ugwu n’ozuzu na-ahọrọ akwa na oghere 10%; na-eche ihu n’ebe ndịda n’ozuzu ha na-ahọrọ ákwà ndị nwere oghere 5%.
China Home ihe ndozi Solar Ikebe Window Sunscreen ala Blind akwa N'ogbe na China
Ala Blind Fabric
Site na mmụba nke ụkpụrụ ibi ndụ, ndị mmadụ nwere ihe dị elu ma dị elu maka akwa windo ndo windo. Ndị ahịa anaghịzi a attentiona ntị na ọdịdị nke China sunscreen roller blind blind akwa na China, mana na-etinyekwu uche na nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi nke akwa ịchọ mma ụlọ. Ya mere, ihe dị iche iche na-arụ ọrụ nke ákwà mkpuchi na-apụtawanye ìhè.
Mgbaze ọkụ na nchekwa ọkụ
Shading akwa nwere ezi kwes mkpuchi e ji mara na ndị ọzọ na akwa na-enweghị, nke nwere ike n'ụzọ dị irè na-egbochi okpomọkụ site anyanwụ radieshon, ukwuu mbenata ojiji ọnụego nke ime ụlọ ikuku conditioners, nke nwere ike iwepụ ruo 86% nke anyanwụ radieshon na na-ime ụlọ ikuku ezigbo ma nwee ike ịnụ ụtọ ngosi mara mma na mpụga windo nke nkasi obi.
N'ogbe ndị na-ere ahịa china na-ere ahịa windo windo na-ekpuchi mkpuchi ihu igwe
Ọrụ nke igwe eletrik na-ekpuchi
1.chekwa ike ma kpuchido gburugburu ebe obibi
Ala shutter ụzọ na windo nwere àgwà nke mara mma na akwụkwọ udi, kọmpat na elu Ọdịdị, mfe ọrụ, ruggedness, ike rigidity, ezi akara, ọ dịghị na-arụ nke ala ebe, mgbanwe na-adaba adaba oghere na mmechi, wdg, nke rụzuru nke ọma. nke a na nzaghachi maka usoro nchekwa nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi.
2. Nchedo oyi
Igwe eletriki igwe eletrik nwere ezigbo arụmọrụ arụmọrụ, nwere ike ịbawanye mmetụta nke nchebe oyi, ma dabara adaba maka iji ụlọ gị
1.Ndị ihu igwe na-adịghị mma
Ihe pụrụ iche eji eji ihe eji eme ihe na eletrik na-eme ka o guzosie ike na ọnọdụ niile siri ike, nke a na-ekweghị ka ákwà mgbochi ndị ọzọ dị mfe maka ojiji ụlọ.
2. Emegide pry
Ọdụdọ windo eletrik na-adịgide adịgide, sie ike ma sie ike, nke nwere ike igbochi ndị ohi nkịtị imetụ ma chebe ndụ gị na ihe onwunwe gị n'akụkụ niile.
Shutter Window Sunscreen ternkpụrụ Spring ala Blind akwa
Igwe na-ekpuchi ikuku iji mezuo ụlọ ahụ.
Site na mmepe nke ọha mmadụ, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-achọ maka ọnọdụ ọkụ na ihu igwe dị n'èzí. Agbanyeghị, n'okpuru ọdịdị dị mma nke ụlọ iko, enwere ọtụtụ nsogbu: mmetụta griin haus, ike dị elu, radieshon nke anyanwụ Na ndị mmadụ na-agbaso nchedo gburugburu ebe obibi, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nchekwa na akụkụ ndị ọzọ, windter roller shutter abanyewo ndụ ụlọ. Ya mere, olee uru nke windproof roller blinds?
1.Sun gosipụtara arụmọrụ
Igwe ikuku na-ekpuchi ikuku nwere ike igosipụta ọtụtụ ìhè anyanwụ, ma dozie ìhè anyanwụ na-abanye n'ime ụlọ ahụ. Ojiji ya anaghị ewere ohere.
Window Roller N'èzí Sunshades Vinyl Sunscreen Blinds Fabric
China Roller kpuru ìsì
Ka ọ dị ugbu a, e nwere ngwaahịa dị iche iche nwere anwụ na ahịa na ahịa. Maka ndị ahịa, otu esi azụta ngwaahịa dị mma site n'ọtụtụ ngwaahịa? Na mkpokọta, enwere ike kewaa ya na isi ihe ndị a.
(1) ika: Họrọ ngwaahịa na elu ika mmata, na àgwà na ahịa ọrụ ga-emerịrị;
(2) Ọrụ: Mgbe ị na-azụ ngwaahịa, ndị na-eri ihe ekwesịghị ịhọrọ naanị ngwaahịa nwere ezigbo ọmarịcha ọrụ, kamakwa ị paya ntị na arụmọrụ nke ngwaahịa a;